Rosia handefa indray ny sidina Armenia sy Azerbaijan
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Rosia handefa indray ny sidina Armenia sy Azerbaijan
Ny Federasiona Russia dia manohy ny serivisy serivisy iraisampirenena amin'ny firenena mifandimby
Sidina roa isan-kerinandro no hatao eo anelanelan'ny Moskoa sy Baku
Sidina efatra isan-kerinandro no hatao eo anelanelan'ny Moskoa sy Yerevan
Nanomboka niverina tsikelikely ny serivisy serivisy iraisampirenena i Russia tamin'ny fahavaratra 2020
Nanambara ny tompon'andraikitra misahana ny asa fanaovan-gazety an'ny governemanta rosiana fa hanangana serivisy serivisy miaraka amin'i Armenia sy Azerbaijan ny federasiona rosiana manomboka ny 15 febroary.
Sidina roa isan-kerinandro no hatao eo anelanelan'ny renivohitr'i Rosia, Moskoa sy renivohitra Azerbaijan, Baku, ary sidina efatra - eo anelanelan'ny Moskoa sy ny renivohitr'i Armenia, Yerevan.
"Tapa-kevitra ny hanohy ny serivisy serivisy iraisampirenena miaraka amin'ny Azerbaijan (Mosko-Baku, sidina roa isan-kerinandro) sy Armenia (Mosko-Yerevan, sidina efatra isan-kerinandro) manomboka ny 15 feb 2021," hoy ny tatitra.
Ny isan'ny sidina mpandeha mahazatra mankany Kyrgyzstan (làlan'i Moskow-Bishkek) dia hampitomboina hatrany amin'ny iray hafa hatramin'ny iray ka hatramin'ny telo isan-kerinandro manomboka ny 8 febroary.
Nampiato an'i Russia ny sidina mpandeha ara-barotra rehetra any amin'ny firenena hafa ao afovoan'ny Covid-19 areti-mifindra tamin'ny martsa 2020. Nanomboka tamin'ny fahavaratra lasa ny serivisy serivisy iraisampirenena.
Manitatra portfolio i Marriott amin'ny toerana fialan-tsasatra lehibe
Nihaona tamin'ny filohan'ny misiona vaovao ny minisitry ny fizahan-tany